Q-20 Shandaranley – dhugasho
Balayax waxa uu markii uu muddo joogay isku dayay in uu camal raadsado, oo albaabka horay u dhaafo, balse xirfad magaalo waxba kama yaqaan, oo sooyaalka nolashiisa waxba uma dhaxayn xera geel iyo xero askareed. Balayax muddadii uu tababarka askarnimo ku jiray, wuxuu sis fiican u bartay qoraalka Af-soomaaliga, sidoo kale lambarrada xisaabtana wuxuu ku qori jiray far qalqalloocan, teeda kale boodh kasta oo wax ku qoran yihiin iyo xaashi kasta oo wax ku qoran yihiin wuxuu isku dayi jiray in uu akhriyo. Balayax, maalintii dambe ayuu billaabay in uu ku lug daro labadii wiil ee ay daaradda wada seexanayeen, wuxuuna subax walba suuqa u raaci jiray, mid ka mid ah labadi wiil.
Wiilka uu Balayax raacaa wuxuu suuqa ku iibin jiray maryo huudhey ah, meel u dhaw waddo baabuurtu marto, Balayaxna huudheyda ayuu wiilka la iibiyaa, maalmaha qaar ayay askarta Jabuuti suuqa ku soo figaasaan oo ay maryaha, oo ay maryaha hudhayda ah kala qubaan, qolyaha iibinayana waa la raafaa. Hase yeeshee, Balayax aad buu uga feejignaa in inta la qabto dib loogu masaafuriyo Soomaaliya. Balayax waxaa tartiib tartiib uga sii hadhaysay diiftii iyo darxumadii uu ka dhaxlay askarnimadii iyo waayihii uu soo maray , aakhirkiina intuu xuub dhacsaday oo labeeni martay ayuu dib u soo noqday shacnigiisii.
Dhinaca kalena marba marka ka dambaysa, waxaa u sii kordhayay il magaalo, wuxuuna in door ah ka fahmay shuqulkii magaalada iyo sida loogu noolaan karo.
Wuxuu wadaba, wuu durugsaday, wuxuuna ilaalka ka hooyay iibinta dharka iyo dus-duska suuqa. Wuxuu noqday nin aamin ah, oo aanu qof bartaa waligii ka xiiso goynayn. Balayax, inkasta oo uu magaaladii aad u dhax galay, wax badana kala qabsaday dhaqanka iyo nolasha magaalada, haddana mar qudha kuma dhaqaaqin, balwadaha ay dhallinyarada qayrkii ah, sida daqsi fuud arkay ay ugu daateen.
Balayax aakhirkii wuu ka dallacay huudhaydii, wuxuuna u wareegay iibinta dharka cusub, oo inta uu soo iibiyo xoogaa mushqaayad ah laga siin jiray, ka dibna, mushqaayadihii la siin jiray, ayuu uruursaday, wuxuuna aakhirkii noqday nin iskii wax u iibsada, isaga oo hadba wax xoogaa dhar ah, oo ka sii dabo macaasha macdaarrada waawayn ka soo iibsada.
Balayax, wuxuu markii dambe ku caan noqday iibinta dharka haweenka, isaga oo dharka dumarku xidhaan la meeraysan jiray suuqyada magaalada iyo suryooyinka xaafadaha Jabuuti, waxaa inta badan wax ka iibsan jiray dumarka guryaha jooga iyo gabdhaha adeegtooyinka ah, ee xaafadaha u shaqeeya.
Gabayga- Dardaaran Walaal